स्थायी कमिटी बैठक Archives - Lokpati.com
Tag - स्थायी कमिटी बैठक
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज पनि पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बस्दै छ। हिजोदेखि जारी बैठक आज पनि बस्न लागेको हो। समान वरियताका दुई जना अध्यक्ष रहेकाले यस पटकको बैठकको...
प्रचण्ड–माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठक पेरिसडाँडामा : यी विषयमा हुँदैछ छलफल
काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को प्रचण्ड–माधव समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्दै छ। पेरिसडाँडास्थित पार्टी कार्यालयमा आज दिउँसो ३ बजे बैठक बस्ने भएको हो।
आजको बैठकमा संसद् विघटनविरुद्ध संघर्षका कार्यक्रमबारे...
देशव्यापी जनसभा गर्ने, यी हुन् नेकपाका मूख्य निर्णय
काठमाडौं, १४ पुष । । विवाद र आलोचना भएपछि नेकपाको स्थायी समिति बैठक १४ दिन लम्बियो । पार्टी अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेताहरूले खुलेर आलोचना गरे ।
ओलीले पार्टी र सरकारमा गल्ती गरेको औँल्याउँदै...
नेकपा बैठक : अध्यक्षको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित
काठमाडौं, १३ पुुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थायी कमिटीमा पेश गरेको प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । शुक्रबार बिहान बसेको स्थायी समिति बैठकले उक्त...
प्रधानमन्त्री ओलीले आज स्थायी कमिटीमा जवाफ दिने
काठमाडौं, १२ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीबार स्थायी कमिटीको बैठकमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् ।
दिउँसो ३ बजे पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा बस्ने स्याथी...
काठमाडौँ, ८ पुस । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको आजको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यस्तताका कारण आज अपराह्न ४ः३० बजे बोलाइएको बैठक स्थगन भएको केन्द्रीय...
नेकपा बैठक : रिर्पोटिङ सकियो, अध्यक्षद्वयको जवाफ भोलि
काठमाडौँ, ७ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी तेस्रो बैठकले पार्टी पङ्क्ति लाई उत्साहित ढङ्गले अघि बढाइ बाँकी कार्यभार पूरा गरेर अघि बढ्ने कुरामा जोड दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी...
नेकपा बैठक : कसरी परिमार्जन हुँदैछ प्रतिवेदन ?
काठमाडौं, ७ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी (नेकपा) को स्थायी कमिटीमा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन परिमार्जन हुने भएको छ । प्रतिवेदन स्थायी कमिटी सदस्यहरुको सुझावको आधार...
नेकपा बैठक : वक्तालाई बीस मिनेट
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सोमबारको स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनको महत्वका बारेमा चर्चा गर्दै छलफलमा सहभागी हुन सदस्यहरुलाई आह्वान गरेका थिए ।
नेकपा बैठक : ‘घोषणा पत्रअनुसार कार्यक्रम र बजेट आएन’
काठमाडौँ, २ पुस । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटीको जारी तेस्रो बैठकमा आज बोल्ने अधिकांश सदस्यले सरकार र पार्टीको नेतृत्वले अपेक्षाकृत रुपमा तीव्र गतिमा काम नगरेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
सरकारले गरेका राम्रै...
सूर्य थापालाई डा. पौडेलकाे जवाफ : ‘हामी महामानव हाैं भनेर लेख्नुस्’
पेट्रोलियम पदार्थमा चोरी गर्ने १३ सय ट्यांकर कारवाहीमा
किन स्थगित भयो नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक ?
प्रधानमन्त्रीले डाके मन्त्रिपरिषदको बैठक
गलत मान्छेका कारण कमजाेर भयाैं : जनार्दन शर्मा
संसद सचिवालयले भन्यो : संसदमा दुईवटा नेकपा चिन्दैनौं
ओली समूह छाडेर सांसद शर्मा प्रचण्ड-नेपाल पक्षमा
डिम्याट खाता खाेल्नेकाे स‌ंख्या ३० लाख नाघ्याे